Mashape Jikọọ Ndị Mmepe na APIs Martech Zone
Mashape Jikọọ Ndị Mmepe na API
Bọchị Sọnde, Machị 2, 2014 Douglas Karr
Ruo ogologo oge, m goto maka ịchọta APIs bụ Web programmụ - mana nke ahụ nwere ike gbanwee mgbe ị gụsịrị Mashape. Mashape adịghị mfe ndekọ ndekọ nke API, ọ na - ejikọ ya API ozugbo na nchekwa ha. Nke a ga - enyere gị aka ịdebanye aha, chọta ma nwalee ihe API enweghị nsogbu ọ bụla ma ọlị.
Nke a bụ ndepụta nke uru na atụmatụ ha:
Ihe niile n'otu ebe - nyocha otu API dị iche iche ka ị were, họrọ, ma tulee API n’otu ebe.
Otu Akaebe - Mashape nye gị nzere iji nweta ihe API niile ejiri na ngwa gị.
Jikọọ na ndị mmepe - ozi emere na sistemụ nsogbu iji kwado nkwukọrịta n'etiti ndị mmepe.
Gbalịa Tupu Code Mee koodu - agbakọta API akwụkwọ na ule njikwa na-enye gị ohere ịnweta otu API enweghị nkwa.
track API ojiji - na omimi nchịkọta, akụkọ, njehie, na ojiji ndenye aha nke ọtụtụ API gị n’otu ebe.
Otutu ulo akwukwo ndi ahia - họrọ asusu mmemme ma dobe oba akwukwo n'ime oru ngo gi.
Nkesa ozugbo - bipụta ọhaneze API ọ na-adịkwa ruo ọtụtụ puku ndị mmepe na-arụ ọrụ. I nwekwara ike ịgbakwunye nkeonwe API ma rụọ ọrụ ọnụ n'ime nzukọ gị.
fọrọ nke nta API Doc Editor - mepụta ma ọ bụ dezie akwụkwọ onwe gị ma ọ bụ nke ọha na eze, na-enyere ndị mmepe aka ịghọta ma rie API gị ngwa ngwa.
Okwu Emeputara Obodo - Mepụta, kwuo, ma soro otu API inye akụkọ banyere chinchi ma ọ bụ malfunctions.
APIs dị mfe itinye ego - Nye nhọrọ ịgba ụgwọ ọhaneze ma ọ bụ nkeonwe. You na-ekpebi ntọala ọnụahịa niile, dịka ịkpọ oku ma ọ bụ ihe pụrụ iche; nakwa ike ịmepụta ọtụtụ atụmatụ na atụmatụ atụmatụ.
Ọnọdụ na ọkwa API - lelee onodu nke API, tinyere ogha laten ya na onodu oge ya. Anyị na-eziga ọkwa nke nsogbu na mmelite arụmọrụ.
Nchịkwa nchịkwa - nọmba nke API oku, ọnụego nnabata nke ndị mmepe jiri API gị, yana ọnụọgụ nke njehie.
Tags: APIapisntinye ntinye ihe omumechọta api
Olee otú ibu bụ Tumblr?
ỌdịnayaVerse: Nchịkọta akwụkwọ na arụmọrụ akpaaka